जनता लुट्ने छुट किन ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीलाई थानकोट–हेटौंडा सुरुङमार्गको जिम्मा दिइयो । यो आयोजनाको नाम नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी राखियो । यिनले विदेशी लगानीकर्ता ल्याउने भनेर क्यानडाली इन्फ्राबेन्स टीएमसँग सम्झौता पनि गरेको देखाए । यसरी यिनले ४ वर्षसम्म कम्पनीलाई आफू र भर्ति गरेका आफन्तमार्फत लुट्नु लुटे । क्यानडाली कम्पनीमार्फत ५ करोड लुटेको खुलासा पनि भयो । पछि यिनले अध्यक्ष पद छाडिदिए । यिनका विरुद्ध थानकोटदेखि हेटौंडासम्मका खसीबोका, घडेरी बेचेर लगानी गर्ने आमनागरिकहरुले उजुरी पनि गरे तर यिनलाई सरकारले, अख्तियारले कसैलै पनि कारवाही नै गरेनन् । हेटौंडामा विद्युत प्राधिकरणलाई बेच्न तामा भनेर सिलावर प्रयोग भएका ट्रान्सफर्मर निर्माण कम्पनी इकरातमा लगानी गरेर देशलाई लुटे । जनता र देशलाई लुटेको आरोप लागिसकेपछि छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? पद छाड्दैमा सबै भ्रष्टाचार नियमित हुने हो भने यो देशमा सुशासन कहिले स्थापित हुनेहोला ?
यी तिनै जोशी हुन् जसले क्यानडाली कम्पनीसँग वैदेशिक लगानी जुटाएर सुरुङमार्ग बनाउने सपना बाँडेका थिए । खुब प्रचार पनि गरेका थिए, तर आज यिनी ती कुनै पनि क्रियाकलापको जिम्मेवारी लिन चाहदैनन् । २ सय ८० मिलियनको सपना बाँडेर जनताले जम्मा गरेको ३० करोडमा हालीमुहाली गरेर पन्छिएका कुशकुमार जोशीको त्यतिबेलाको सबै क्रियाकलाप, सम्झौता र आर्थिक कारोवारको लेखाजोखा हुनुपर्छ भन्ने सामान्य लगानीकर्ताहरुको माग रहेको छ । महासंघको पूर्वअध्यक्ष भएकै कारण दबाब दिएर सरकारलाई प्रभावमा पारेको र अख्तियारको कारवाहीबाट बचेका कुशकुमार जोशी जनताको कारवाहीबाट कहिलेसम्म बच्लान्, यसैभन्छन् लगानीकर्ताहरु ।
केही विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरेर उनीहरुले राखेको ५ प्रतिशत धरौटी रकम ग्लोबल आइएमई बैंकमा राखेको र सो रकमसमेत कुशकुमार जोशीले हजम गरेको आरोप छ केही सञ्चालक सदस्यहरुको ।
यसबारेमा पनि जोशीले मुख खोलेका छैनन् । अख्तियारमा परेको उजुरीमा ग्लोबल बैंकको खातापाता, जम्मा रकम र झिकेको मितिसमेत उल्लेख गरिदा समेत अख्तियारले जोशीको फाइल तामेलीमा राखेको बताइन्छ ।
जनताको सिधा लगानी भएको पूर्वाधार कम्पनी र यसका तत्कालीन अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले गरेको आर्थिक हिनामिनाका सम्बन्धमा जनता आक्रोसित भइरहेका छन् । यो आयोजना यति महत्वाकांक्षी आयोजना हो थियो कि अव यो आयोजना नै बन्ने कि नबन्ने टुङ्गोमा छैन । जापानले सहयोग गरेर थानकोट नौबिसे अर्को सुरुङमार्ग बन्ने भएको छ । जापानी सहयोग आइसकेको स्थिति छ । पूर्वाधार कम्पनी भने भ्रष्टाचारको दलदलको आहालमा छ ।
यी जोशी यति चलाख छन् कि कारवाहीबाट बच्नका लागि भाष्करराज राजकर्णिकारले गठन गरेको चिनियाँसँगको सहकार्यको ओविओआरमा सदस्य बन्न पुगेका छन् । अव यी जोशी थानकोट हेटौंडा सुरुङमार्ग भारतले बनाउनु भन्दा चीनले बनाउनु उपयुक्त हुनेछ भन्ने राजनीति गरेर चीनलाई आकर्षित गर्न सफल हुनलागेका छन् । आश्चर्य के पनि छ भने यति ठूलो आयोजनामा आफ्नै अध्यक्ष भाष्करलाई समेत यिनले जानकारी दिएका छैनन् ।
के त्यसो भए जनता लुट गर्नेलाई छुट नै हुन्छ त ? लुटाहले छुट पाउने भए के को सुशासनको कुरा गर्नु ?नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीलाई थानकोट–हेटौंडा सुरुङमार्गको जिम्मा दिइयो । यो आयोजनाको नाम नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी राखियो । यिनले विदेशी लगानीकर्ता ल्याउने भनेर क्यानडाली इन्फ्राबेन्स टीएमसँग सम्झौता पनि गरेको देखाए । यसरी यिनले ४ वर्षसम्म कम्पनीलाई आफू र भर्ति गरेका आफन्तमार्फत लुट्नु लुटे । क्यानडाली कम्पनीमार्फत ५ करोड लुटेको खुलासा पनि भयो । पछि यिनले अध्यक्ष पद छाडिदिए । यिनका विरुद्ध थानकोटदेखि हेटौंडासम्मका खसीबोका, घडेरी बेचेर लगानी गर्ने आमनागरिकहरुले उजुरी पनि गरे तर यिनलाई सरकारले, अख्तियारले कसैलै पनि कारवाही नै गरेनन् । हेटौंडामा विद्युत प्राधिकरणलाई बेच्न तामा भनेर सिलावर प्रयोग भएका ट्रान्सफर्मर निर्माण कम्पनी इकरातमा लगानी गरेर देशलाई लुटे । जनता र देशलाई लुटेको आरोप लागिसकेपछि छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? पद छाड्दैमा सबै भ्रष्टाचार नियमित हुने हो भने यो देशमा सुशासन कहिले स्थापित हुनेहोला ?
के त्यसो भए जनता लुट गर्नेलाई छुट नै हुन्छ त ? लुटाहले छुट पाउने भए के को सुशासनको कुरा गर्नु ?